Onyinye | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye onyinye na mba niile - edepụtara n'okpuru ebe a bụ ndị nne na nna na ndị nlekọta kacha baa uru. Ọ bụ ezie na anyị na-agbasi mbọ ike iji hụ na njikọ ndị a ziri ezi, ruo n'oge ma dị mkpa, Olọ Akwụkwọ Oakleigh enweghị ike ibu ọrụ maka ibe ndị na-eweta mpụga.
Ọ bụrụ n’inwere aro ọ bụla maka websaịtị nke ịchọtara bara uru biko gwa anyị.
The Baily Thomas Ọrụ ebere Fund nyere onyinye ruru £ 5,000 n'ụlọ akwụkwọ na-arụ ọrụ na ndị na-eto eto nwere nkwarụ mmụta. Enwere ike iji ego nyere maka isi obodo, ndozi na ndozi na igwu egwu. A na-anabata arịrịọ n'ime afọ niile
Gaa na Baily Thomas Charitable Fund
Tọrọ ntọala na 1994, Todaymụaka Taa ekepụtara iji nyere ụmụaka na ndị na-eto eto nwere nkwarụ aka ruo afọ iri abụọ na ise gafee UK site n’inye onyinye maka akụrụngwa pụrụ iche. Ọtụtụ mgbe ụmụaka na ndị na-eto eto nwere nkwarụ na-anọgide na-ewepu site na ibi ndụ nke ndị ọzọ nwere ike were dị obere.
Gaa Leta Todaymụaka Taa
The Dreamlọ ọrụ Nrọ bụ ọrụ ebere e guzobere 10 afọ gara aga iji nye nrọ maka ụmụaka na ndị na-eto eto nọ n'agbata afọ 3 ruo 25 bụ ndị na-ata ahụhụ site na ndụ egwu ma ọ bụ ọnọdụ na-egbochi ndụ ma ọ bụ ndị nwere nnukwu nkwarụ.
Ha na-enye nrọ n'ime ihe dịka 50 kilomita nke mpaghara Chigwell na Hainault nke Essex ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ebere ọzọ enyebeghị nrọ.
Gaa Leta Dreamlọ Ọrụ Nrọ
The Ntọala Elifar bụ obere ọrụ ebere nke na-enyere aka melite ndụ ụmụaka na ndị na-eto eto nwere nnukwu nsogbu mmụta na njikọta anụ ahụ metụtara.
Ha na-enye onyinye maka ọtụtụ ihe gụnyere oche nkwagharị elektrọnik, oche pụrụ iche, ihe oriri, akwa pụrụ iche na njem, ihe ndozi, ngwaọrụ nkwukọrịta, akụrụngwa sensory na ezumike ọkachamara.
Gaa Leta Elifar Foundation
Ndi Esmée Fairbairn Foundation Ebumnuche iji melite ogo ndụ na UK. Ha na-enye onyinye maka ịkwalite ndụ ọdịbendị, agụmakwụkwọ, gburugburu ebe obibi na-enyere ndị ọghọm aka isonye na ọha mmadụ.
Gaa Leta Esmée Fairbairn Foundation
Ego Ezinụlọ bụ ọrụ ebere UK kachasị ukwuu na-enye onyinye maka ezinụlọ na-azụlite ụmụaka nkwarụ ma ọ bụ ụmụaka na-arịa ọrịa siri ike na ndị na-eto eto. N'afọ gara aga, anyị nyere onyinye ma ọ bụ ọrụ 88,119 karịrị nde £ 33 nye ezinụlọ dị na UK.
Gaa na Ego Ezinaụlọ
na Mmalite Ahụ Ike, ị na-enweta akwụkwọ ego n'efu kwa izu iji na-eri mmiri ara ehi, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ na oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, na mmiri ara ehi nke ụmụ ọhụrụ. I nwekwara ike inweta vitamin anaghị akwụ ụgwọ.
Ime ime ma ọ bụ nwee ụmụaka na-erubeghị afọ anọ? Nwere ike iru eru ma ọ bụrụ na ị na-erite uru, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị dị ime na n'okpuru 18.
Gaa leta Ahụike
Inmụaka nọ Mkpa ugbu a ọ dị afọ 35th ma ka na-arụsi ọrụ ike iji nweta ego ma nye ọtụtụ ọchịchọ dị ka o kwere mee.
Ha bụ ọrụ ebere edebara aha nke, site na onyinye na ntinye ego, na-enye 'ọchịchọ' maka ndị na-eto eto dị afọ 3 ruo 19 bụ ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa ma ọ bụ na-arịa ọtụtụ nkwarụ.
Gaa Leta inmụaka Nọ ná Mkpa
AFK m (nke bụbu Action For Kids) bụ ọrụ ebere mba na-akwado ụmụaka nwere nkwarụ, ndị na-eto eto na ndị ezinụlọ ha. Ha na-enyere aka ịkwadebe ndị na-eto eto nwere nkwarụ mmụta maka ndụ mgbe ha gụsịrị akwụkwọ site na mmemme agụmakwụkwọ, ọzụzụ na ahụmịhe ọrụ anyị.
Ha na-enyekwa ngwongwo agagharị na NHS maka ụmụaka nwere nkwarụ na ndị na-eto eto ruo afọ 25 n'ofe UK.
Gaa na AFK m
Ndụ ohuru bụ UK onye ọrụ ebere kachasị ukwuu na-ahụ maka ngwa ọrụ nkwarụ ụmụaka. Ha na-elekọta naanị ọrụ ọrụ mberede mba UK, maka ụmụaka na-arịa ọrịa na-enweghị atụ. Ndị nọọsụ Newlife na-akwado ọtụtụ puku ezinụlọ, ha na-agbachitere maka mgbanwe amụma na ha na-akwado ego nyocha ahụike, iji melite ahụike ụmụaka.
Emeghachi - Enyemaka ọsọ ọsọ maka ụmụaka nwere ike ịnwụ ọrịa bụ ọrụ ebere siri ike na-arụ ọrụ iji melite ogo ndụ maka ụmụaka nwere ọrịa na-egbochi ndụ bi na ezinụlọ ndị nwere nsogbu ego na UK niile.
Oge Mmiri bụ onyinye afọ ofufo ụmụaka na-enye mmeri na-eme ka ndụ ụmụaka na-arịa ọrịa siri ike na UK dị afọ atọ ruo 18 afọ site na-enye ọchịchọ, inye ọchịchọ ụlọ ọgwụ na ịhazi ọpụpụ na nnukwu ihe omume maka ụmụaka na-arịa ọrịa siri ike.
Gaa Leta ụzarị nke anwụ
Roald Dahl nyere Ezigbo Ego Ezinaụlọ bụ maka ezinụlọ ndị nwere nsogbu akụ na ụba ka ha na-elekọta nwatakịrị nwere nnukwu ọrịa. Ha na-enye nkwado iji nyere ezinụlọ aka ịnagide, site na iji ngwa ọkachamara na usoro ọgwụgwọ na usoro ọgwụgwọ wee mefuo njem ụlọ ọgwụ.
Gaa Leta onyinye dị ebube Roald Dahl nyere
Sequal Trust, Otu obere onyinye ego mba na-ahụ maka Charity, nke hibere na 1969, nke na-agba mbọ idozi oghere nkwukọrịta maka ndị nwere nkwarụ nọ n'afọ ndụ niile na UK. Ebumnuche anyị bụ inyere onye ọ bụla n'ime anyị nwere nkwarụ aka iru ike ha niile site n'inye ndị ọrụ nkwukọrịta kwesịrị ekwesị.
Gaa Leta Nnọkọ Njikọ ahụ
The Mmiri atụmatụ a nwere ike inye gị aka ịkwụ ụgwọ ego gị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ n’ezinaụlọ gị na-enweta elele nke steeti, nwee nnukwu ezinụlọ nwere ụmụ atọ ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ọnọdụ ahụike chọrọ iji mmiri ọzọ.
Hụ weebụsaịtị ụlọ ọrụ mmiri nke mpaghara gị: Mmiri Thames / Mmiri mmekọrita
Gaa Leta Mmiri (Ofwat)